Taageerayaasha Barcelona oo si kulul ugu weeraray Griezmann kulankii xalay ka dhacay Cump Nou iyagoona ka codsaday…. – Gool FM
Taageerayaasha Barcelona oo si kulul ugu weeraray Griezmann kulankii xalay ka dhacay Cump Nou iyagoona ka codsaday….
Dajiye April 7, 2019
(Spain) 07 Abriil 2019. Weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antoine Griezmann ayaa werar xoogan kala kulmay jamaahiirta Barcelona inta uu socday kulankii ay xalay ku wada ciyaareen garoonka Cump Nou.
Barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda Ateltico Madrid oo ku ciyaareysay 10-xidig, kadib markii ay kaga adkaadeen 2-0, waxaana farqiga dhibcaha ee u dhexeeya labada kooxood uu haatan gaaray ilaa iyo 11 dhibcood.
Hadaba Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu xaqiijiyay in taageerayaasha Barcelona ay caayeen weeraryahanka reer France ee Antoine Griezmann, iyaga oo ka dalbaday inuu ka tago garoonka Camp Nou.
Grizmann ayaa loo arkaa inuu yahay xidigaha ugu cad cad ee lala xiriirinayo u dhaqaaqista kooxda Barcelona kadib marka uu furmo suuqa xagaaga ee soo aadan.
Laakiin taageerayaasha kooxda Barcelona ayaa waxay kulankan ku muujiyeen naceybka ay u qabaan Grizmann, iyagoo diidan fikada uu haatan ku imaanayo garoonka Cump Nou, sababa la xiriira inuu iska diiday fursadii uu ku imaan lahaa sanadii 2018, wuxuuna xiligaas doorbiday inuu sii joogo Atletico Madrid.
Leonardo oo si kulul u cambaareeyay garsooraha, kadib guuldaradii Milan kasoo gaartay kooxda Juventus